Mogadishu Journal » Qarax dhimasho sababay oo ka dhacay Caabudwaaq
Mjournal :-Wararka aan ka heleyno degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka dhaceen laba qarax oo dadka degaanka ay sheegeen inay si xoogan u maqleen.
Dadka degaanka ayaa waxa ay sheegeen qaraxydan oo nuucooda uu ahaa miinada dhulka lagu aaso inay kala dambeeyeen daqiiqado kooban, islamarkaana lagu bartilmaameedsaday maqaaxi ay dad shacab ah ku shaaheynayeen.
Ilo wareedyo ayaa Idaacadda Risaala ee magaalada Muqdisho waxa ay u sheegeen in qaraxydan ay ku dhinteen ilaa Saddex ruux, halka ay ku dhaawacmeen Sideed qof oo kale oo dhammaantood ahaa dhacab.
Dadka ku dhaawacmay qaraxydan ayaa waxaa loo qaaday isbitaalka magaalada Ceelwaaq, halkaasi oo xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo.
Maqaaxida qaraxa lala eegtay ayaa mararka qaar waxaa la sheegay inay fariisan jireen ciidanka dowladda oo saldhig ku leh meel aanan ka fogeyn maqaaxida.
Ilaa hadda mamulka degmada iyo saraakiisha ciidanka kama aanay hadlin qaraxyadan, balse waxaa socdsa baaritaano ku aadan sida ay wax u dhaceen.